5 shirkadood oo badaley astaantooda ganacsi sanadkii 2016 – Brandkii
5 shirkadood oo badaley astaantooda ganacsi sanadkii 2016
Sanadadii ugu danbeyay waxay shirkadaha caanka ahi dib u hagaajin ku sameenayeen astaantooda ganacsi iyo waliba nidaamkooda suuq geyn oo dib ay u casriyeeyen, waxaan qormadan ku soo qaadaneyna shan shirkadood oo dib u nashqadeen ku sameeyay astaantooda ganacsi.
Guinness waa shirkad iibisa alkahoolka oo laga leyahay ireland, waa markii ugu horeesey eey shirkadu dib u casriyeen ku sameeso sumadeeda ganacsi muda laga joogo 10 sano, shirkada nashqadeeysay astaantan ayaa ah mid aqoon dheerada u laheyd sumadeynta iyo waliba dib u qurxinta astaanta ganacsi.
Wakhti dhaweed ayaa kasoo wareegay markii dadku aad uga soo hadleen isbadalka cusub ee lagu sameyay astaanta ganacsi ee shirkada sawirada iyo muqaalada ee Instagram inbadan dadku maysan ku raacin taalabada shirkada lakin waxay sheegeen dadka khubarada ku ah sumadeynta in qaabkan cusub uu yahey mid soo jiidasho leh dadkana xiisa galinaya.
Co-op ayaa dib usoo celisey astaanteedi hore ee 60 danaadkii madaamo ay u aqoonsatey inay tahey mid fudud oo macamiisha ka caawineysa iney hore u xasuustan.
Afartii qof ee meel joogaba hal qof oo ka mida ah ayaa isticmaalo Gumtree, waana wakhtigii ugu fiicana ee shirkadu sameen laheyd isbadal dhanka astaanta ganacsi, astaantooda hore maysan u ekeen mid hore loo aqoon san karo lakin hada waxa fududaanaysa aqoonsiga shirkada.
Mudo badan ayuu liibaaxu ka muuqday Premier lakin dhamadkii 2016 ayaa shirkadu soo bandhigtey astaanteeda cusub, waxay ku qexeen khubarada sumadeyntu inay tahey astaan carsi ah, fudud sido kale la xidhiidha ujeedada shirkada.
Waxay ila tahey inaad fahantahey faa’iido uu leeyahey in dib loo casriyeeyo astaanta ganacsi ee shirkadi leedahay. Hadii aad dooneysa in aad dib u cusbooneysid astaantada gaarka ah Brandkii ayaa kaa caawin doonta sidad ku heli laheyd astaan cusub oo la jaan qaadi karta casriga maanta fadlan nala soo xidhiidh/Xiriir.
Ganacsigaagu ma ubaahanyahey mareeg (website)?
10 ka shirkadood ee ugu sumada (logo) fiican aduunka
Sanadkani waxa uu ku dhawyahey gabogabo, waxanan rabnaa inan dib uyara milicsano guulihii isdaba jooga ahaa ee shirkada Brandkii ay gaadhey iyo cashiradii badnaa ee anu ka baraney. Sanadkani waxaa uu ahaa mid wata...
Faa’iidada uu leeyahey kaarka shaqadu.
Inta badan dadku ma dareemaan faa’iidada uu leyahey kaarka shaqada lakiin marka qof ku waydiiyo nambarkaaga ama iimaylkaaga waxaad markaba raadisaa meel aad ugu reebto xogtaas qofka ku waydiyay, laga yaaba in...
Shanta ujeedo ee ugu mihiimsan marka aad sameesaneysid website.
Laga yaabaa inaad is weysiideso ujeedada ama yoolka laga leeyahey in uu ganacsigaagu lahaado mareeg (website) waana muhiim inaad wax walba ood dhaqaale iyo wakhti galineysa aad u jeedo cad ka lahaato, Hadaba marka aad...
We are hiring a Website Developer !!!
Imisa lacag ah ayaan ku shubta Facebook page kayga?
Maxaa ka qaldan xayaysiinta aad Facebook kada kusameeso?
Ma sameysaa khaladkan marka aad rabtid in laguu sameeyo mareeg (Website).
Ku xooji xayaysiinta ganacsigaaga baraha bulshada (Social Media)
Brandkii is a leading Creative Design, Web development and Digital Marketing Company that specialize in providing innovative solutions that accelerate businesses towards next level of success.
Copyright © 2020. Powered by Brandkii
Wax Ka Baro 10 ka Shaqsi Ee Lacagaha Ugu Badan Ka Sameeyay Youtube Ka Sanadkan 2016 Ka.
Sidee Youtube Lacag Looga Sameeya? (5 dariiq Oo muhim ah)
Q1: Waxa ka baro baraha bulshada(Social Media) qaybiihiisa kala duwan.
Sida Ugu Fudud Oo Aad Twitter Ka Uga Dhigi Kartid Verified